မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး ဖြစ်လာတော့မည့် မြန်မာနွယ်ဖွား ထိုင်းမင်းသား (သို့မဟုတ်) ဧ၀ရက်မိုး – WunYan
မြန်မာ့အနုပညာလောကထဲမှာ အနုပညာ ပါရမီရင့်သန်သူတွေ တစ်စထက်တစ်စပေါ်ထွက်လာလို့နေပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ၊ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ တဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ်ထွက်လာနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်တော့မယ့် တက်သစ်စ မင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူ့နာမည်ကတော့ ဧဝရက် မိုး (သို့မဟုတ်) eve လို့ခေါ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်သံစီးရီးဖြစ်တဲ့ GMM ရဲ့ တရားဝင် ကြေငြာထားတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဧ၀ရက်မိုးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ ရွှေကြိုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း စိပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လာရောက်ပြုလုပ်တဲ့ GMM ရဲ့မင်းသားသစ်ရွေးချယ်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးမင်းသားဖြစ်တာကြောင့် GMM ကနေ ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်အချိန်က Instagram ရဲ့ story မှာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဏလေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ စိတ်သဘောထားအနည်းငယ်ကို သိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနွယ်ဖွားစစ်စစ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ GMMTV ဟာ BL စီးရီးတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတာကြောင့် အဆိုပါ အကြောင်းအရာတွေကို မေးမြန်းခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကို ပညာသားပါပါနဲ့ ယခုလိုပဲဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ လိင်တူခြင်းချစ်ကြိုက်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တော်ရုံအများပြည်သူတွေ လက်မခံသေးတဲ့ အနေအထားမှာရှိနေပါသေးတယ်။ အဆိုပါ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ လိမ္မာပါးနပ်လှပါတယ်။ “အနုပညာအလုပ်လုပ်ရင်တော့ ဝေဖန်ခံရမှာပဲလေ.။ BL ရိ်ုက်ဖြစ်လဲ ဒါက ကိုယ် သရုပ်ဆောင်လေ လုပ်ရမှာပဲ! ဝေဖန်လည်း ဘာမှ ပြန်ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဗျ..။ ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
လိင်တူခြင်း ချစ်ကြိုက်တာနဲ့ လိင်ကွဲချစ်ကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးမှာ ဘယ်ဇာတ်ကားမျိုး ပိုရိုက်ချင်သလဲလို့မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ..သူ့အနေနဲ့ NORMAL ကို ပို အားသာကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ GMM နဲ့ ၅နှစ်ကြာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ GMM ရဲ့ BL အတွဲတွေထဲမှာ နာမည်ကျော် Sotus ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့မင်းသား ၂လက်ဖြစ်တဲ့ Singto နဲ့ Krist တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့ရဲ့ Idol ကတော့ Push ပါတဲ့။
ပရိတ်သတ်တွေက အားပေးကြမ်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့အနေနဲ့ အရမ်းသည်းခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းအောင်ဖြေသွားပါသေးတယ်။ အချိန်တန်ရင် မြန်မာပရိတ်သတ်တွေရော၊ နိုင်ငံ တကာက ပရိတ်သတ်တွေပါ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ကြမယ့် သူဆိုတာ မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။
သူဟာ GMM ရဲ့ Bravo Boy ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးဖို့ တက်သစ်စအနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်အပြီးမှာတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာစကားကိုလည်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြောတတ်ပြီး အနာဂတ်မှာတော့ တကယ့်ကို အားပေးထိုက်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်အဖြစ် အလားအလာကောင်းတွေကို မြင်နေရပါပြီ။ ပရိတ်သတ်ကြီးကော သူ့ကို အားပေးချစ်ခင်ကြမယ်မဟုတ်လား။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံး ဖွဈလာတော့မညျ့ မွနျမာနှယျဖှား ထိုငျးမငျးသား (သို့မဟုတျ) ဧဝရကျမိုး
မွနျမာ့အနုပညာလောကထဲမှာ အနုပညာ ပါရမီရငျ့သနျသူတှေ တဈစထကျတဈစပျေါထှကျလာလို့နပေါပွီ။ နိုငျငံတကာ အဆငျ့မှီတဲ့ ဒါရိုကျတာတှေ၊ မငျးသား၊ မငျးသမီးတှေ၊ အဆိုတျောတှေ တဖွညျးဖွညျးခငျြးစီပျေါထှကျလာနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခါမှာဆိုရငျလညျး နိုငျငံတကာကို ထိုးဖောကျတော့မယျ့ တကျသဈစ မငျးသားတဈယောကျနဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ သူ့နာမညျကတော့ ဧဝရကျ မိုး (သို့မဟုတျ) eve လို့ချေါပွီး ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး ရုပျသံစီးရီးဖွဈတဲ့ GMM ရဲ့ တရားဝငျ ကွငွောထားတဲ့ မငျးသားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဧဝရကျမိုးဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုပေးပှဲမှာ ရှကွေိုအဖွဈပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျမှာတော့ ဆကျတိုကျဆိုသလို အနုပညာလှုပျရှားမှုတှလေညျး စိပျလာခဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ ထိုငျးနိုငျငံမှ လာရောကျပွုလုပျတဲ့ GMM ရဲ့မငျးသားသဈရှေးခယျြပှဲမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ပါတယျ။ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ ရှကျပုနျးသီးမငျးသားဖွဈတာကွောငျ့ GMM ကနေ ရှေးခယျြခွငျးခံခဲ့ရပါတယျ။
သိပျမကွာခငျအခြိနျက Instagram ရဲ့ story မှာ ပရိတျသတျတှနေဲ့အမေးအဖွကေဏ်ဏလေးပွုလုပျခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ သူ့ရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှနေဲ့ စိတျသဘောထားအနညျးငယျကို သိရှိခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါအကွောငျးအရာတှကေို ပရိတျသတျကွီးလညျး ကွညျ့ရှုလို့ရအောငျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
သူဟာ မွနျမာနှယျဖှားစဈစဈတဈဦးဖွဈပါတယျ။ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ GMMTV ဟာ BL စီးရီးတှနေဲ့ နာမညျကွီးတာကွောငျ့ အဆိုပါ အကွောငျးအရာတှကေို မေးမွနျးခဲ့တဲ့ ပရိတျသတျတှရေဲ့မေးခှနျးတှကေို ပညာသားပါပါနဲ့ ယခုလိုပဲဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ ဟာ လိငျတူခွငျးခဈြကွိုကျတာနဲ့ ပတျသတျလို့ တျောရုံအမြားပွညျသူတှေ လကျမခံသေးတဲ့အနအေထားမှာရှိနပေါသေးတယျ။ အဆိုပါ အကွောငျးအရာနဲ့ပတျသတျလို့ ဝဖေနျခံခဲ့ရရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးရဲ့အဖွကေတော့ လိမ်မာပါးနပျလှပါတယျ။ “အနုပညာအလုပျလုပျရငျတော့ ဝဖေနျခံရမှာပဲလေ.။ BL ရိုကျဖွဈလဲ ဒါက ကိုယျ သရုပျဆောငျလေ လုပျရမှာပဲ! ဝဖေနျလညျး ဘာမှ ပွနျပွောမှမဟုတျပါဘူးဗြ..။ ” လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
လိငျတူခွငျး ခဈြကွိုကျတာနဲ့ လိငျကှဲခဈြကွိုကျတဲ့ ဇာတျကားမြိုးမှာ ဘယျဇာတျကားမြိုး ပိုရိုကျခငျြသလဲလို့မေးခဲ့တဲ့အခြိနျမှာတော့ ..သူ့အနနေဲ့ NORMAL ကို ပို အားသာကွောငျးဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ သူဟာ GMM နဲ့ ၅နှဈကွာ စာခြုပျခြုပျဆိုထားကွောငျးလညျးပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ GMM ရဲ့ BL အတှဲတှထေဲမှာ နာမညျကြျော Sotus ဇာတျလမျးတှဲရဲ့မငျးသား ၂လကျဖွဈတဲ့ Singto နဲ့ Krist တို့ပဲဖွဈပါတယျတဲ့။ သူ့ရဲ့ Idol ကတော့ Push ပါတဲ့။
ပရိတျသတျတှကေ အားပေးကွမျးလာတဲ့အခါမြိုးမှာ သူ့အနနေဲ့ အရမျးသညျးခံနိုငျကွောငျးကိုလညျး ခဈြဖို့ကောငျးအောငျဖွသှေားပါသေးတယျ။ အခြိနျတနျရငျ မွနျမာပရိတျသတျတှရေော၊ နိုငျငံ တကာက ပရိတျသတျတှပေါ သညျးသညျးလှုပျခဈြကွမယျ့ သူဆိုတာ မွငျယောငျနမေိပါတယျ။
သူဟာ GMM ရဲ့ Bravo Boy ဇာတျလမျးတှဲရိုကျကူးဖို့ တကျသဈစအနနေဲ့ ရှေးခယျြခံခဲ့ရတာဖွဈပွီး သွင်ျကနျအပွီးမှာတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှရေိုကျကူးဖို့ ပွငျဆငျသှားမယျလို့သိရပါတယျ။ ထိုငျးဘာသာစကားကိုလညျး ၇၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပွောတတျပွီး အနာဂတျမှာတော့ တကယျ့ကို အားပေးထိုကျတဲ့ မငျးသားတဈလကျအဖွဈ အလားအလာကောငျးတှကေို မွငျနရေပါပွီ။ ပရိတျသတျကွီးကော သူ့ကို အားပေးခဈြခငျကွမယျမဟုတျလား။